तपाइँको स्टार्टअप - YTpals को लागी एक YouTube च्यानल सुरु गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
तपाईंको स्टार्टअपको लागि YouTube च्यानल सुरु गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू
यो एक व्यापक रूपमा ज्ञात तथ्य हो कि YouTube भिडियो स्ट्रिमिङको लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने प्लेटफर्महरू मध्ये एक हो। प्लेटफर्म विगत केही वर्षहरूमा द्रुत रूपमा बढिरहेको छ। 2017 मा, YouTube को विश्वव्यापी सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू लगभग 1.86 बिलियन थिए, यो संख्यालाई पार गर्यो 2.3 मा 2020 अरब। यी तथ्याङ्कहरूले सङ्केत गर्छ कि YouTube ले नयाँ व्यवसायहरूलाई उनीहरूको विकास सुरु गर्नको लागि आकर्षक ठाउँ प्रदान गर्दछ। स्टार्ट-अपहरूको लागि YouTube द्वारा प्रदान गरिएको अवसर धेरै छ। तपाइँ ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न वा तपाइँका उत्पादन वा सेवाहरूको ट्यूटोरियल र कसरी भिडियोहरू सिर्जना गर्न विज्ञापनहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ दर्शकहरूलाई तपाइँको व्यवसायमा पर्दा पछाडिको दृश्य दिन YouTube प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं आफ्नो व्यवसायको लागि YouTube च्यानल सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने, तपाईं सही ठाउँमा आउनुभएको छ। यो लेखले YouTube च्यानल सुरु गर्ने आधारभूत कुराहरू समावेश गर्नेछ। त्यस पछि, हामी तपाइँलाई तपाइँको व्यवसाय को वृद्धि मा सहायता गर्न को लागी YouTube को उपयोग को बारे मा सुझावहरु दिनेछौं।
स्टार्ट-अपको लागि YouTube च्यानल कसरी बनाउने
तपाइँको व्यवसाय को लागी एक YouTube च्यानल सिर्जना गर्न को लागी एक चरण-दर-चरण गाइड निम्न छ -
चरण 1: तपाईंको व्यवसायको अवस्थित Google खाता प्रयोग गरेर YouTube मा साइन इन गर्नुहोस् वा नयाँ सिर्जना गर्नुहोस्। यो खाता विशेष रूपमा तपाईंको व्यवसायमा समर्पित हुनुपर्छ।
चरण 2: YouTube मा होमपेजबाट, तपाइँ तपाइँको स्टार्ट-अपको YouTube च्यानलको नाम सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ।
चरण 3: तपाईंले आफ्नो व्यापार खाता बारे थप विवरणहरू भर्न सक्नुहुन्छ।
चरण 4: एउटा च्यानल प्रतिमा सिर्जना गर्नुहोस् र कलाकृति समावेश गर्नुहोस् जुन तपाईंको व्यवसायलाई राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्दछ।
चरण 5: आफ्नो YouTube च्यानलको विवरण भर्नुहोस्।
चरण 6: गतिविधि र विशेष च्यानलहरू सेट अप गर्नुहोस्।
चरण 7: सामग्री अपलोड गर्नुहोस्।
महत्त्वपूर्ण कुराहरु लाई विचार गर्न को लागी
यद्यपि तपाइँको व्यवसायको लागि YouTube च्यानल सिर्जना गर्नु एक साधारण 7-चरण प्रक्रिया हो, तपाइँ तपाइँको YouTube च्यानल सिर्जना गर्दा केहि चीजहरू विचार गर्नुपर्छ।
1. YouTube मा आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस्
स्टार्ट-अपको रूपमा, तपाईंको YouTube च्यानल अन्य YouTube च्यानलहरू भन्दा फरक उद्देश्य प्रदान गर्नेछ। YouTube च्यानलको लक्ष्यहरू सुरुदेखि नै निर्धारण गर्न आवश्यक छ। आदर्श रूपमा, लक्ष्यहरू तपाईंको व्यवसायको लागि थप लीडहरू प्राप्त गर्न र अधिक राजस्व उत्पन्न गर्न नेतृत्वहरू रूपान्तरण गर्नुपर्दछ। तपाईं आफ्नो इमेल सूची थप्न YouTube बाट प्राप्त लीड पोषण गर्न सक्नुहुन्छ। यस इमेल सूचीले त्यसपछि सम्झौताहरू पठाउन, सम्बन्धहरू निर्माण गर्न, र उद्योगसँग सम्बन्धित समाचारहरू साझा गर्न सक्छ।
2. आफ्नो YouTube च्यानलको लागि बजेट सिर्जना गर्नुहोस्
तपाईंले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेपछि, च्यानलको लागि बजेट सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यसले तपाईंलाई भिडियोहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गरिने उपकरणहरू कभर गर्न आवश्यक छ र तपाईंलाई च्यानल चलाउन मद्दत चाहिन्छ कि छैन। तपाइँको बजेट तपाइँ उत्पादन गर्न चाहानु भएको सामग्रीको प्रकार र गुणस्तर द्वारा निर्धारण गरिनेछ। यदि तपाईं उत्कृष्ट उत्पादन मूल्यको साथ उच्च गुणस्तरका भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको YouTube च्यानलको बजेट स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ। यो किनभने तपाईंले किन्नुहुने उपकरणहरू बाहेक तपाईंले भाडामा लिनुहुने भिडियोग्राफरहरू र सम्पादकहरूको टोलीका लागि तपाईंले आफ्नो बजेटको केही अंश छुट्याउनुपर्नेछ।
3. ब्याचहरूमा भिडियोहरू सिर्जना गर्नुहोस्
आफ्नो नयाँ YouTube च्यानल संग एकरूपता कायम राख्न, यो समय अगाडी योजना बनाउन सबै भन्दा राम्रो छ। आफ्नो पहिलो भिडियो च्यानलमा पोस्ट गर्नु अघि, यो एक राम्रो विचार हुनेछ लगभग नौ अन्य भिडियोहरू तयार छ। जब तपाइँ 10 को ब्याचमा सामग्री तयार गर्नुहुन्छ, यसले तपाइँलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न अनुमति दिन्छ र तपाइँलाई अन्य पक्षहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न समय दिन्छ। जब तपाइँ तपाइँको भिडियोहरूमा ब्याचहरूमा काम गर्नुहुन्छ, यसले तपाइँको YouTube यात्रालाई कम व्यस्त देखाउनेछ।
तपाईंको व्यवसायको लागि नयाँ YouTube च्यानल सिर्जना गर्न सुरुमा चुनौतीपूर्ण लाग्न सक्छ, तर निरन्तर प्रयासहरूले पक्कै नतिजा ल्याउनेछन्। दर्शकहरूबाट आवश्यक संलग्नता प्राप्त गर्न अक्सर नयाँ च्यानलहरूका लागि गाह्रो साबित हुन्छ। दर्शकहरूबाट राम्रो ध्यान प्राप्त गर्न, तपाईंको च्यानलको मेट्रिक्स सुधार गर्न आवश्यक छ। यो जहाँ भरपर्दो सेवा प्रदायकहरू मनपर्छ YTpals तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ। हामीसँग प्रिमियम YouTube सेवाहरूको दायरा छ जसले तपाईंको च्यानल बढाउन मद्दत गर्न सक्छ। तिमी सक्छौ YouTube हेर्ने घण्टा किन्नुहोस्, YT Pals बाट हेराइहरू, लाइकहरू, र सदस्यहरू पनि, जसले YouTube एल्गोरिदमलाई तपाईंको पक्षमा काम गर्न मद्दत गर्दछ। YTpals ले हरेक सेवासँग १००% सुरक्षा ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ। सेवा सामान्यतया अर्डर दिए पछि 100 देखि 24 घण्टा भित्र सुरु हुन्छ। यदि तपाइँसँग हाम्रो सेवाहरूको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने, तपाइँ आज हाम्रो ग्राहक सेवालाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ!
तपाईंको स्टार्टअपको लागि YouTube च्यानल सुरु गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू YTpals लेखकहरू द्वारा, 27 डिसेम्बर 2021
के तपाइँका भिडियोहरू यूट्यूबका लागि पर्याप्त छन्?
YouTube भिडियो मार्केटिंगको लागि एक उत्तम प्लेटफर्म हो, र अधिक व्यवसायहरूले यसको ब्रान्ड प्रमोट गर्न यसको फाइदा लिइरहेका छन्। प्लेटफर्ममा यति धेरै प्रतिस्पर्धाको साथ, यो तपाईंको ब्रान्ड हो भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक छ ...
तपाइँको भिडियोलाई YouTube खोज परिणामहरूमा उच्च स्तर किन बनाउँछ?
के तपाइँ युट्युब खोजी परिणामहरूमा उच्च श्रेणी दिन मद्दत गर्ने तरिकाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? यूट्यूब एल्गोरिदम नेभिगेट गर्न मुश्किल हुन सक्छ, तर वास्तवमा तपाईंको र्या imp्कमा के प्रभाव पार्छ यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ। लक्ष्य ...